Maraykanka iyo Itoobiya oo isku Maan-dhaafay Heshiis la’aanta Biyo-xidheenka Webiga Nile | Aftahan News
Maraykanka iyo Itoobiya oo isku Maan-dhaafay Heshiis la’aanta Biyo-xidheenka Webiga Nile
Addis Ababa / Washingtong (aftahannews):- Dowladaha Itoobiya iyo Maraykanka, ayaa isku maan-dhaafay Biyo-xidheenka Webiga Nile blue Itoobiya ka samaynayso, isla markaana ay isku khilaafsan yihiin Itoobiya, Masar iyo Sudan, Maraykankuna soo dhex-galay khilaafkaas.
WEBIGA BIYAHA NILE IYO KHILAAFKA KA TAAGAN BIYO-XIDHEENKA ITOOBIYA 2020
Waxay Dowladda Itoobiya sheegtay in halka ay Dowladda Mareykanku ka taagan tahay Biyo-xidheenka muranka dhaliyay ee Nile uu yahay mid aan la aqbali karin. Washington ayaa wadahadal ka dhex waday dalalka Masar iyo Itoobiya oo in muddo ah ku muransanaa mashruuca biyo xireenka oo laga cabsi qabay in uu dagaal u horseedo labada dal.
Arrintan ayaa timid kadib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo-xireenka aanan la dhameystiri karin ilaa iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo. Wasaraadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Itoobiya ay ka qeybgeli doontaa wadahadalada ka socda Magaalada Washington.
BIYO-XIDHEENKA ETHIOPIA EE WEBIGA NIILKA 2020
Masar ayaa ka baqeysa in wabiga uu gacanta u galo Dowladda Itoobiya, waxaana ay dooneysaa in biyo buuxinta biyo xireenka ay muddo qaadato, si aanay isu dhimin biyaha wabiga. Arrintan ayaa xiisad ka dhex abuurtay labada dal, waxaana mid walba uu ku goodiyay in uu qaadi doona tallaaba walba oo laga mamaarmaan ah, si ay u ilaashadaan danahooda.
Dowladda Mareykanka ayaa soo kala dhexgashay labada dhinac sanadkii 2019-ka, si ay u dhexdhexaadiso, waxaana toddobadkii lasoo dhaafy ay sheegtay in la gaaray heeshiis, waxaana xukuumadda Washington ay Itoobiya ku boorisay inay dhaqangeliso heshiiska. Heshiiskaas ayaa waxaa uu dhigaya in aanan la buuxinin biyo xireenka iyadoo aanan la saxiixin heshiiska rasmiga ah.